Ngaba uya kuphulukana neNtengiso yakho kwiRobhothi? | Martech Zone
Ngaba uya kuphulukana noMsebenzi weNtengiso kwiRobhothi?
Le yenye yezithuba othe wakhwaza kuzo… emva koko uye kufumana isithsaba se-bourbon ukuze usilibale. Ekuboneni kokuqala, oku kubonakala ngathi ngumbuzo ongenangqondo. Ungambuyisela njani umphathi wentengiso emhlabeni? Oko kuyakufuna ukubanako ukufunda indlela yokuziphatha yabathengi ngokucokisekileyo, ukuhlalutya idatha entsonkothileyo kunye neendlela ezichanekileyo, kwaye ucinge ngobuchule ukuza nezisombululo ezisebenzayo.
Umbuzo ufuna ukuba sixoxe ukuba yeyiphi imisebenzi esiyenzayo njengabathengisi mihla le xa kuthelekiswa nabathengisi ekufuneka besenza yonke imihla. Uninzi lwentengiso luhambisa idatha ukusuka kwinkqubo ukuya kwinkqubo, ukuphuhlisa kunye nokuhlalutya iingxelo ukunika ubungqina bokuba iimvavanyo zabo zazisemthethweni, zazingavumelekanga, okanye zinokulungiswa, emva koko basebenzise ubuchule babo ukuqhuba iziphumo zeshishini.
Iziphumo zokuqhuba kweshishini ngobuchule kubonakala ngathi sisiseko sentengiso nganye, nangona abathengisi abaninzi bengafumani xesha laneleyo lokwenza oko. Iinkqubo ziphelelwe lixesha, iinkqubo azinxibelelani, ukutshintsha kweemarike, kwaye sifuna iindlela ze-agile nokuba ziqhubeke nje. Ngenxa yoko, uninzi lweenzame zethu zichithwa ngaphandle kwexabiso lethu lokwenyani- ubuchule. Kwaye ubuchule kunokuba sesona sithintelo sinzima ekuthatheni indawo irobhothi. Oko kwathethi… imisebenzi esichitha ixesha lethu elininzi kuyo inokuthi ithathe indawo kwakamsinya kunokuba ucinga.
Ukuqhubela phambili kwitekhnoloji kuyonwabisa kubathengisi kuba baya kususa imisebenzi yesiqhelo, ephindaphindayo, kunye nohlalutyo kwaye basenze sikwazi ukugxila kwimizamo yethu apho italente yethu injalo ubuchule.
Ukufunda ngomatshini- ngeenkcukacha ezingaphezulu nangaphezulu ezihlanganisiweyo zokondla idatha yentengiso, idatha yokhuphiswano, kunye nedatha yabathengi, isithembiso sokufunda komatshini kukuba iinkqubo zinokucebisa, zenze, kwaye zenze uvavanyo olwahlukeneyo. Cinga malunga nexesha elingakanani oza kubuya ngalo xa ungafuneki uthambise kwaye ubuze idatha rhoqo nangaphezulu.
Kukubhadla okungeyonyani -Kodwa ukuba ubuninzi bunokuba ngamashumi ambalwa eminyaka, ubukrelekrele bokufakelwa yinkqubela phambili enomdla kwindawo yentengiso. I-AI isadinga inani elingenasiphelo ledatha ukufikelela kwinqanaba lokuyila lomntu namhlanje, ke kuyathandabuzeka ukuba umphathi uza kutshintshwa nangaliphi na ixesha kungekudala.
Oko akuthethi ukuba i-AI ayinakuze iphinde iphinde iphinde iphinde yenzeke, nangona kunjalo. Khawufane ucinge inkqubo ehlalutya idatha yokucofa kwintengiso-emva koko ihlalutye iintengiso ezikhuphisanayo. Mhlawumbi i-AI inakho funda uyenza njani umahluko osengqiqweni kwizihloko zakho nakwizibonisi zokuphucula ukucofa kunye nokuguqula. Asikuko minyaka kude kulonto-ezi nkqubo zilapha.
Uyilo lomntu luxeliswa ngokulula, kodwa kuya kuba nzima ukuphindaphinda. Andizithembi kakhulu ukuba ndiza kubona irobhothi ikhulisa njengephulo lokuyila njengoko iLeisurejobs yenze ngale infographic ngalo naliphi na ixesha kungekudala. Kodwa ndiqinisekile kwiminyaka embalwa eya kuba nakho ukufunda kuyo kwaye ndiyikope!
I-47% yabasebenzi iya kutshintshwa ziirobhothi ngo-2035, leliphi ithuba lokuba ubuyiselwe?
Ngaba Umsebenzi Wakho Uya Kuphela?
tags: 2035aikukubhadla okungeyonyaniikumkamyokufunda umatshiniukunyuka kweerobhothiukuthengisa iirobhothiukutshintshwa kwerobhothi
Uyenza njani intengiso esekwe kwiAkhawunti (ABM)